Page-79 All Products - Hobby Carbon CNC Technology(Shenzhen) Limited
I-3k cfrp ye-composite ikhabhoni fiber ibhodi iipleyiti
Amandla aphakamileyo okusika i-carbon fiber drone plate
I-7075 ye-aluminium ekhompyuter enamaqhosha entloko e-Scadcopter
I-M5 yokuzikhiya i-Flange Aluminium Alloy Nylon Nut
I-M3X25mm 7075 i-aluminium socket cap bolts ye-FPV
I-3K Ingaphezulu kweCarbon Fibre yeDashthi yeDrone
I-M3 I-Aluminium Inyathelo leRound Standounds
Ixabiso elithengisiweyo leCarbon Fibriti amaGibhithe
Ukucocwa kweCarbon Fibrashe UkwaSika ezinye iiNdawo zoBukhulu
Ibanga eliphezulu le-Epoxy Resin T700 yeCarbon Fiber Plate
Iphepha elipheleleyo le-3K Till ye-Matte Carbon Fibre
Ubungakanani be-OEM kunye ne-ODM enemibala yeBarbon Carbon
I-3K Carbon Fiber Plate CNC yokusika iiNxalenye
Drones Ikhaya Idiphu Aluminium Tee Lock Nut
Intengiso eshushu eBay Aluminium Ukugcina i-Nut Lock Lock
Uhlobo lweFlange Aluminium Prop Nut ethengisiweyo iNut
Umgangatho ophezulu womgangatho wokusebenza kweCarbon fiber
Umgangatho ophezulu weAluminiyam 7075 Lug Nut Socket
I-OEM i-carbon fiber plate
I-3k cfrp ye-composite ikhabhoni fiber ibhodi iipleyiti Ingcaciso yeMveliso: Iphepha lethu le-carbon fiber alibandakanyi izinto zokungcola . Ubungakanani bethu obuqhelekileyo ngama-400x500mm / 500x600mm kwaye sinobunzima obuyi-0.5-7.0 mm kwisitokhwe. Isixhobo: I-3K Full Carbon Fibre Ubungqingqwa: 3.0mm imibala:...
Amandla aphakamileyo okusika i-carbon fiber drone plate Ingcaciso yeMveliso: Iphepha lethu le-carbon fiber alibandakanyi izinto zokungcola . Ubungakanani bethu obuqhelekileyo ngama-400x500mm / 500x600mm kwaye sinobunzima obuyi-0.5-7.0 mm kwisitokhwe. Isixhobo: I-3K Full Carbon Fibre Ubungqingqwa: 3.0mm imibala:...
I-HobbyCarbon ehambelana ne-7075 ye-aluminium iqhosha leentloko ze-screws ze-Quadcopter Isithabazi se-Hobbycarbon M3 7075 yeAluminiyam sithandwa kakhulu ngenxa yesisindo sabo sokukhanya, amandla aphezulu kunye nemibala ethandwayo emarikeni. Nantsi i-aluminium iqhosha lekhanda entloko, unokuba nokujonga imifanekiso....
I-M5 yokuzikhiya i-Flange Aluminium Alloy Nylon Nut I-aluminium nati ene-flange yinutwane ene-flange ebanzi kwelinye icala esebenza njenge Washer edityanisiweyo, engashukumiyo. Oku kukhonza ekusasazeni uxinzelelo lwe-nati ngaphezulu kwenxalenye ekhuselweyo. ukunciphisa amathuba omonakalo kwinxalenye kwaye kuyenze...
I-HobbyCarbon M3X25mm 7075 i-aluminium socket cap bolts ye-FPV Isithabazi se-Hobbycarbon M3 7075 yeAluminiyam sithandwa kakhulu ngenxa yesisindo sabo sokukhanya, amandla aphezulu kunye nemibala ethandwayo emarikeni. Nantsi i-aluminium iqhosha lekhanda entloko, unokuba nokujonga imifanekiso. Kwaye sinemibala...
Iinxalenye zeCNC zoShishino lweeNqaku eziHlalisiweyo Inkcazelo : Inkonzo yokuphucula logo ye-CNC Iinkcukacha zexabiso : ixabiso lixhomekeke kuyilo nobungakanani. Khumbula : pls usithumelele imizobo (.dxf file / .step file) Inkonzo ye-CNC: Sisebenza ngenkonzo yokuprinta iilogo kangangesithuba seminyaka eli-10...
Min. Myalelo: 5 Piece/Pieces
I-3K Ingaphezulu kweCarbon Fibre yeDashthi yeDrone Ubungqingqwa beplate bu malunga ne-2,5mm. Iplate yenziwa nge-T300 / T700 ekumgangatho ophezulu we-epoxy resin. Ukukhanya kunye nokuzinza, iipleyiti zeCF zihlala zikhethwa ngabathengi ukutshintsha abanye. (I-G10 Glass Fiber Sheet.Carbon Glass Sheet). Ingcaciso...
I-M3 I-Aluminium Inyathelo leRound Standounds I-Aluminium Round Standoff kwiHobby ikhabhathi ilungile yokufakwa ngaphakathi okanye ngaphandle kokufakwa kwamabala, ukubonisa iipaneli, iipaneli zophawu, umkhombandlela kunye nolwazi lweempawu, imiqondiso yoyilo, uluhlu lweenkampani, iipaneli zeglasi, iifreyimu zeefoto,...
Ixabiso elithengisiweyo leCarbon Fibriti amaGibhithe Ubungqingqwa beplate bu malunga ne-4.0mm. Iplate yenziwa nge-T300 / T700 ekumgangatho ophezulu we-epoxy resin. Ukukhanya kunye nokuzinza, iipleyiti zeCF zihlala zikhethwa ngabathengi ukutshintsha abanye. (I-G10 Glass Fiber Sheet.Carbon Glass Sheet). Ingcaciso...
Min. Myalelo: 30 Piece/Pieces
Ukucocwa kweCarbon Fibrashe UkwaSika ezinye iiNdawo zoBukhulu Inkonzo yokusika ye-CNC kwiphepha lefrokhoni yecarbon carbon ithwala ubunzima obunobunzima obuphantsi, isetyenziswa ngokubanzi kwimodeli yehelikopta kunye nemakethi yokuzonwabisa. Malunga nesakhiwo sephepha lekhabhon fiber, inkonzo yokusika i-cnc kwiphepha...
Ibanga eliphezulu le-Epoxy Resin T700 yeCarbon Fiber Plate Ubungqingqwa beplate bumalunga ne-3.0mm. Iplate yenziwa nge-T300 / T700 ekumgangatho ophezulu we-epoxy resin. Ukukhanya kunye nokuzinza, iipleyiti zeCF zihlala zikhethwa ngabathengi ukutshintsha abanye. (I-G10 Glass Fiber Sheet.Carbon Glass Sheet). Ingcaciso...
Ixabiso lento: USD 15.4 / Piece/Pieces
Iphepha elipheleleyo le-3K Till ye-Matte Carbon Fibre Eli phepha liphela le-carbon fiber sheet, nelidume kakhulu kwizixhobo zekhabhonibrari sheet. Zombini i-0/90 degree kunye ne-0/45 / -45 / 90 degree (iQuasi-isotropic) yoshicilelo lwe- carbon fiber sheets ziyafumaneka. I-1k, 1.5k, 3k iikhabhoni zekhabhabhdi egcweleyo...
Ubungakanani be-OEM kunye ne-ODM enemibala yeBarbon Carbon Ngokubanzi, abantu bangathanda ukusebenzisa iipleyiti zekhabhoni yecarbon. Kwaye sinokunikezela ngemibala yefreyimu yelayisensi yecarbon fiber. Inkonzo ye-OEM kunye ne-ODM iyafumaneka. Ingcaciso yeMveliso: Into No.:CHCF049 Isixhobo: I-3K Full Carbon Fibre...
Ixabiso lento: USD 51.3 / Piece/Pieces
I-3K Carbon Fiber Plate CNC yokusika iiNxalenye Imishini ye-CNC inezi zinto zilandelayo: Umgangatho womatshini uzinzile, ukuchaneka koomatshini kuphezulu, kwaye ukuphindaphinda ukuchaneka kuphezulu, okulungele iimfuno zokwenza inqwelomoya. Sixhasa CNC carbon ifayibha ukusika, CNC aluminiyam ukusika, ezinye ukusika...
Drones Ikhaya Idiphu Aluminium Tee Lock Nut Intshayelelo yeMveliso I-aluminium nati ngokubanzi ithathwa ngokuba luhlobo olunye lokuqina kwealuminium. Ihlala isetyenziswa kwizixhobo zasekhaya naseziofisini, izixhobo zonxibelelwano, indibano yenqanawa kunye nolunye ushishino loomatshini. Ngokwesiqhelo sinobungakanani...
M3 Indoda kwibhinqileyo Kumlon Round Standoff Indawo yokulinda i-Hobby nylon kukudityaniswa kwezinto ezimbini zokubeka endaweni yazo, kwaye istrand isebenza ikakhulu kwizinto ezahlukeneyo zombane kunye nezixhobo ze-elektroniki eziqulathe iibhodi zesekethe zesipaneleki, iipaneli, iingcango okanye iigiya. ngaphezulu...
Intengiso eshushu eBay Aluminium Ukugcina i-Nut Lock Lock Intshayelelo yeMveliso I-aluminium nati ngokubanzi ithathwa ngokuba luhlobo olunye lokuqina kwealuminium. Ihlala isetyenziswa kwizixhobo zasekhaya naseziofisini, izixhobo zonxibelelwano, indibano yenqanawa kunye nolunye ushishino loomatshini. Ngokwesiqhelo...
Uhlobo lweFlange Aluminium Prop Nut ethengisiweyo iNut Intshayelelo yeMveliso I-aluminium nati ngokubanzi ithathwa ngokuba luhlobo olunye lokuqina kwealuminium. Ihlala isetyenziswa kwizixhobo zasekhaya naseziofisini, izixhobo zonxibelelwano, indibano yenqanawa kunye nolunye ushishino loomatshini. Ngokwesiqhelo...
Umgangatho ophezulu womgangatho wokusebenza kweCarbon fiber Ubungakanani bolu hlobo lwephedi yecarbon fiber yi- 400x500mm . Isebenzisa i-100% yekhabhonathi yefayibrari ukwenza. Kwiminyaka yakutshanje, iipleyiti zekhabhoni zekhabhoni zithandwa yi-RC. Kwakhona, sinayo iipleyiti zeglasi yecarbon kunye neplanti yeglasi...
Umgangatho ophezulu weAluminiyam 7075 Lug Nut Socket Intshayelelo yeMveliso I-aluminium nati ngokubanzi ithathwa ngokuba luhlobo olunye lokuqina kwealuminium. Ihlala isetyenziswa kwizixhobo zasekhaya naseziofisini, izixhobo zonxibelelwano, indibano yenqanawa kunye nolunye ushishino loomatshini. Ngokwesiqhelo...
I-OEM i-carbon fiber plate Ubungakanani bolu hlobo lwephedi yecarbon fiber yi- 400x500mm . Isebenzisa i-100% yekhabhonathi yefayibrari ukwenza. Kwiminyaka yakutshanje, iipleyiti zekhabhoni zekhabhoni zithandwa yi-RC. Kwakhona, sinayo iipleyiti zeglasi yecarbon kunye neplanti yeglasi yentsimbi. Inkonzo ye-OEM kunye...